သမ္မတကတော်အဲဂုတ္တုပြည်၌ | slot Fruity £5+ £ 500 အခမဲ့! သမ္မတကတော်အဲဂုတ္တုပြည်၌ | slot Fruity £5+ £ 500 အခမဲ့!
10 ရက်ကြောင့်မှားယွင်းခြင်းနှင့်9payline slot က, သမ္မတကတော်အဲဂုတ္တုပြည်၌ သငျသညျအာဏာအရှိဆုံးအမျိုးသမီးလီယိုပတ်ထပါဝါ၌တည်ရှိ၏ဘယ်မှာအဲဂုတ္တုရှေးခေတ်မြေယာသွားရောက်လည်ပတ်စေမည်. အဆိုပါ ဖုန်းကို slot ကစက်အားဖြင့်ဥပဒေကြမ်း မြန်နှုန်းတပ်ဆင်ထားရသောအတော်လေးအနေနဲ့သမားရိုးကျမဟုတ်သောဂိမ်း Active ကို Reels လှည့်ဖျားနေသည်.
ဤ ဖုန်းကို slot ကစက်အားဖြင့်ဥပဒေကြမ်း သိပ္ပံဂိမ်းများအားဖြင့် powered ဖြစ်ပါတယ်. အဆိုပါကုမ္ပဏီစည်းမျဉ်းထီ၏ဧရိယာများနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ရှေ့ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်. သူတို့ကိုအားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးအဆိုပါဂိမ်းကြွယ်ဝသောအကြောင်းအရာများဖြစ်ကြပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ themes များနှင့်အင်္ဂါရပ်နှင့်အတူလာ.
အဆိုပါ ဖုန်းကို slot ကစက်အားဖြင့်ဥပဒေကြမ်း နှင့်တကွကြွလာ 10 reels သာ9paylines. ပထမသုံး reels မြန်နှုန်း Active ကို Reels လှည့်ဖျားကိုခေါ်နှင့်ဤဂိမ်းကစားသောပေါ်တွင်သာ reels ဖြစ်ကြ၏. သင်တစ်ဦးအနိုင်ရလှည့်ဖျားရှိသည့်အခါ, ထို့နောက်ထိုအ reels ညာဖက်ကိုဦးတည်နေရာရွှေ့. သငျသညျလှည့်ခြင်းများအနိုင်ရရသည်အထိ reels အဆိုပါ reels ၏အဆုံးတိုင်အောင်အရွှေ့နိုင်ပါတယ်. ဤအ reels နှင့်အတူ, သငျသညျမြှောက်ကိန်းအနိုင်ရ 5x အထိခံနိုငျ. သင်ဤများ၏ reels လည်လို့ရပါတယ် ဖုန်းကို slot ကစက်အားဖြင့်ဥပဒေကြမ်း 35p ကနေ£ 175 စီ spin.The မြင်ကွင်းတစ်ခုတစ် setting နေရောင်၏အလင်းရောင်အတွက်ပျော်ရွှင်ပိရမစ်တွေနဲ့သတ်မှတ်ဘို့. လှပတဲ့လီယိုပတ်ထဒီမှာခဲဇာတ်ကောင်ဖြစ်ပါသည်. အပြင်သူမ၏ထံမှ, အဆိုပါ reels အပေါ်ပေးဆောင်သင်္ကေတအရုပ်စာပါဝင်သည်, တိရိစ္ဆာန်တပါးသောဘုရား, ပုံမှန်ရိုင်းနဲ့လွှင့်.
ဒီ slot က၏အခြားအင်္ဂါရပ်များပါဝင်သည်:
ချေ Expanded- သင်တစ်ဦး3လကျခံလိုလျှင်×3 ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအိုင်ကွန်သို့မဟုတ်နှစ်ခုသုံးရောနှော icon တွေကိုသင်္ကေတ၏တူညီသောအရွယ်အစားပိတ်ပင်တားဆီးမှုထို့နောက်သင်သည်ဤအကျိုးခံစားခွင့်ပေးသနားနေကြတယ်. သငျသညျနှစျခုသုံးပိုမိုမြင့်မားတန်ဖိုးကို icon တွေကိုတစ်ဘလောက်ရနိုင်ကြသည်ဆိုပါကသင်္ကေတပိတ်ဆို့ပြီးနောက်သင် 350x သင့်ရဲ့လိုင်းအာမခံခွင့်ပြုနေကြ. အလတ်စားတန်ဖိုးကို icon တွေကိုသင့်ရဲ့လိုင်းအာမခံ 200x ပေးရန်လိမ့်မယ်. ပိတ်ပင်တားဆီးမှုသင်္ကေတဖွဲ့စည်းအောက်ပိုင်းတန်ဖိုးကို icon တွေကို 50x သင်သည်သင်၏လိုင်းအာမခံပေးသနားတော်မူပါလိမ့်မယ်.
ရက်ကြောင့်မှားယွင်း 10 မြှောက်ကိန်းဆုကြေး- အဆိုပါ reel 10 သငျသညျပေးအပ်နိုင်ပါတယ် 350 ကြိမ်မှ 1,000 ကြိမ်ကျပန်း multiplier. အဆိုပါ reel အလယ်၌ 10, တစ်ဦးမြှောက်ကိန်းမြင်နိုင်သည်နှင့်သင်အောင်မြင်တဲ့လှည့်ဖျားရှိပါကသင်တူညီခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်.
အခမဲ့ဂိမ်းများ- 3,4နှင့်5ဒီ feature ထွက်လာပါတယ်ကြဲဖြန့် icon တွေကိုသင်ရလိမ့်မယ် 8 အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ, 12 10x မြှောက်ကိန်းနှင့်အတူအခမဲ့လှည့်ခြင်းများ, နှင့် 16 အသီးသီး 25x မြှောက်ကိန်းနှင့်အတူအခမဲ့လှည့်ခြင်းများ.
ဤ ဖုန်းကို slot ကစက်အားဖြင့်ဥပဒေကြမ်း တစ်ဦးဆန်းသစ် setup ကိုအတူအလုပ်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့နေဆဲကစားရန်တစ်ဦးမျှမျှတတရိုးရှင်းတဲ့ဂိမ်းဖြစ်နေဆဲ.